NYI LYNN SECK 18+ DEN: Google Earth shows Heart Shaped Mountain in Myanmar
Google Earth shows Heart Shaped Mountain in Myanmar
You might know that there wasaheart shaped Lake in Chin State of Myanmar called Rih Dil (Heart Lake). But, there is another heart shaped mountain can be seen in Sagaing Division (22°11'15.94"N, 94°59'3.02"E) through Google Earth and it is more alike heart than Rih. It is 10.5 miles away from North-West of Monywa and 8 miles away from 30 degree North-East of Yin Mar Bin, Sagaing Division, Myanmar.
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်နားက Rih ရေအိုင်
Crator လမ်းကြောင်းလို့ ယူဆချင်စရာ အနေအထား
အမြင့်ပေ ၅၀၀၀၀ ကျှောမှ မြင်ရစဉ်
အသည်းပုံ ပီပြင်လွန်းတဲ့ တောင်ကုန်း
ကျွန်တှော ဒီဟာကို စတွေ့တော့ တှောတှောလေး အံ့ဩသွားပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်က ရိဒ်ရေအိုင်ဟာ အသဲပုံဖြစ်နေလို့ နာမည်ကျှောတယ်။ ဒီနေရာကတော့ ရိဒ် ရေအိုင်ထက်ကို အသဲပုံ ပိုပီသပါသေးတယ်။ ဒီနေရာဒီပုံစံ ရှိတာကို ဘယ်စာအုပ်မှာမှ မဖတ်ဖူးခဲ့လို့ ဒါကို ပထမဆုံး တွေ့ရှိတာလို့ ထင်မိပါတယ် (Thanks Google Earth!)။ တကယ်တော့ အဲဒီနေရာ တဝိုက်ကို စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ တချို့ကလည်း မီးတောင်ဟောင်းလို့ ပြောကြတဲ့၊ တချို့ကလည်း ဂြိုဟ်ပဲ့တွေ ထိမှန်လို့လို့ ပြောကြတဲ့ တွင်းတောင် ရှိနေလို့ရယ်၊ ရှေးဟောင်းလူရုပ်ကြွင်းတွေ တွေ့ရှိရာ ညောင်ကန်ဒေသ ရှိနေလို့ရယ် မကြာခဏ ဆိုသလို လေ့လာဖြစ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီနေရာကို High Res မြေပုံတွေ ရောက်လာမှ အဲဒီ အသည်းပုံနေရာကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီ အသည်းပုံ တည်ရှိနေတဲ့ နေရာက ယင်းမာပင်မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက် ၈ မိုင်ခန့်၊ စပယ်တောင် ကြေးနီစက်ရုံရဲ့ အနောက်မြောက် ငါးမိုင်ခန့်၊ မုံရွာလေယာဉ်ကွင်းရဲ့ အနောက်တောင် ခုနစ်မိုင်ခန့် အကွာလောက်မှာဖြစ်ပြီး ချောင်းမကြီးနဲ့ ယမားချောင်း ကြားထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတော့ အဲဒီနေရာကို ဖိုလ်ဝင်တောင်လို့ ထင်လိုက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိုလ်ဝင်တောင်က ယင်းမာပင် အရှေ့တောင်ဘက်လောက်မှာ ရှိတာဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ Google Earth မှာရော WorldWind မှာပါ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာကြည့်ပေမယ့် အဲဒီနေရာရဲ့ နာမည်ကို သဲလွန်စ မတွေ့ရပါဘူး။ မြေပုံထဲမှာ ကြည့်တော့လည်း မပါဘူး။ အမြင့်ပေကလည်း ၆ဝဝကျှော၊ အကျယ်အဝန်းကလည်း အချင်း တစ်မိုင်လောက်ဆိုတော့ တောင်ကုန်းတစ်ခုလို့ ထင်မိပါတယ်။ တောင်ကုန်းပေမယ့် သစ်တော သိပ်ထူထပ်ပုံတော့ မရပါဘူး။ တည်ရှိနေပုံက သိပ်ကို စနစ်ကျလွန်းတာမို့ သစ်တောကြိုးဝိုင်း တစ်ခုများလားလို့လည်း ထင်မိသေးတယ်။ မုံရွာမုံရွေးနားက လူတွေတော့ သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘုတလင် တွင်းတောင်ကို မီးတောင်ဟောင်းလို့ အခိုင်အမာ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကလည်း ဂြိုဟ်ပဲ့တွေ (Crator) ထိမှန်ခံရလို့ ဖြစ်လာတဲ့ တွင်းချိုင့်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ ကျွန်တှောလည်း မီးတောင်ဟောင်း ဆိုတာထက် Crator တွေ ထိလို့ ဖြစ်လာတာလို့ ပိုယုံချင်နေမိပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီလို ထိမှန်ခံရရင် Bounce ဖြစ်ပြီး အတန်းလိုက် ချိုင့်နေရာတွေ တွေ့ရလို့ပါပဲ။ (အဲဒီအကြောင်း ဒီနေရာမှာတောင် ရေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်)။ အဲဒီထက် ပိုပြီး တကယ်လို့ ဒါဟာ တကယ့်ကို ဂြိုဟ်ပဲ့တိုက်မိလို့ ဖြစ်လာတာဆိုရင် ဂြိုဟ်ပဲ့ဟာ အမှုန့်မှုန့်ကျေပျက်ပြီး ပျောက်ကွယ်မသွားဘဲ အဲဒီ ချိုင့်ဝှမ်းတွေနဲ့ မနီးမဝေးမှာ တည်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ထင်နေမိတာပါ။ (ပညာရှင်အတွေးမဟုတ်ပါ ကိုယ်စိတ်သန်ရာကို ဆွဲတွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်) အဲဒီအရှိန်ကြောင့် ပုံတောင်ပုံညာက ကျွန်တှောတို့ ဘိုးဘေးကြီးတွေ မျိုးပြုတ်ကုန်တာလားလို့လည်း စိတ်ကူးယဉ်မိပြန်တယ်။ အခု အသည်းပုံ တောင်ကုန်းကလည်း အဲဒီ ချိုင့်ဝှမ်းတွေနဲ့ သိပ်မဝေးတာကြောင့် စိတ်ဝင်စားမိနေပြန်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသည်းပုံ တိတိကျကျ လှလှပပ နေရာလေးတစ်ခုကို ကောင်းကင် ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ မြင်ရတာကို မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဒီဒေသဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကြေးနီထုတ်လုပ်ရာ ဒေသလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ပထဝီမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ လက်ပတောင်းတောင်၊ ကြေးစင်တောင်၊ ခမောက်တောင် စတဲ့ နေရာတွေ တည်ရှိရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့ရာမှာ ဟိုးတစ်ခါ လုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ရွာများ အဘိဓာန်လေးက အကူအညီ ပေးပါတယ်။ အဲဒီတောင်ရဲ့ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြန်လှည့်၊ လက်ပဒေါ၊ အိုးဘို၊ ဥကဿကံ၊ ဘန့်ဘွေး၊ တရောကျင်း စတဲ့ ရွာလေးတွေကို တွေ့ရလို့ အဲဒီရွာတွေကနေ တဆင့် ခြေရာခံကြည့်တဲ့အခါ ဒီနေရာဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ပြန်လှည့်-သီးကုန်း ကျေးရွာစု နဲ့ ဘန့်ဘွေးကျေးရွာစုတွေ ကြားထဲမှာ တည်ရှိနေတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။
Read Entry in Keyhole [Link]
Download Google Earth KMZ File [Download]
Posted by NLS at 9/15/2009 01:40:00 AM
Labels: Google, Interesting, News, Record, Selection
3 Responses to “Google Earth shows Heart Shaped Mountain in Myanmar”
Myat Thura said...
really really like this ... can sense your commitment on sharing ...
ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ကျော်ကတည်းက တွင်းတောင်ကို ရောက်ရင်း ဒီနေရာတ၀ိုက်ကို အကြီးအကျယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်စသုံးပြီး ဂူးဂဲလ်အပ်စသုံးကတည်းက ဒီနေရာတွေကို မကြာခဏကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေစတင်ကတည်းက သဘောကျခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်လည်း ဒီနေရာတွေဟာ မီးတောင်တွေလို့ကို မထင်ခဲ့ဘူး။ တောင်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ မီးသင့်ကျောက်တွေ ရှိနေပေမယ့် အပြင်ဖက်မှာ ချော်ရည်စီးကြောင်းတွေ မရှိပါဘူး။ ပြည်တွင်းက ဘူမိပညာရှင်တချို့ကလည်း မီးတောင်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောတာ မှတ်သားဖူးတယ်။ ကမ္ဘာ့မီးတောင်ဟောင်းစာရင်းထဲမှာလည်း မပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပညာရှင်အမြင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ တစ်တန်းထဲတည်ရှိမှုက အင်မတန်ထူးဆန်းလွန်းလို့ပါ။ ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့ အရှေ့ဖက်ကမ်း တွင်းတောင်မကြီးရဲ့ အရှေ့မြောက် တစ်မိုင်ခွဲလောက်မှာလည်း မထင်မရှား ချိုင့်ခွက်တစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။ အားလုံးပေါင်း ချိုင့်ခွက်ငါးခု တည်ရှိနေတာပါ။ မြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းနားမှာလည်း အ၀ိုင်းပုံ တောင်ပူစာ၊ ကုန်းမြင့်လေးတွေကလည်း လွင်ပြင်ထဲမှာ သီးခြားကို တည်ရှိနေကြတာပါ။ ပြီးတော့ အသည်းပုံ တောင်ပူစာဟာလည်း သစ်ပင်ကြီးကြီးမားမားတွေ မပေါက်တာကိုက ထူးခြားပါတယ်။ ဒီတောင်ဟာ တိုင်းပြည်က လုပ်စားတတ်ရင် ဖိုးဝင်းတောင်၊ ရွာသာယာ(ဆာလ်ဖာကဲတဲ့ရေ အလိုအလျောက်ထွက်တဲ့ ယင်းမာပင်နားကရွာ)၊ ကြေးစင်တောင်၊ လက်ပံတောင်းတောင်၊ ပုံတောင်ပုံညာတို့နဲ့ တစ်ဆက်တည်း စကြာဝဌာထဲက အပိုင်းအဆတွေ တည်ရှိနေနိုင်စရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်အလက်များနဲ့ အချစ်ကံကောင်းစေတဲ့ အသည်းပုံတောင်ဆိုပြီး တိုးရစ်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် အကြီးအကျယ် လုပ်ယူလို့ ရနိုင်ကောင်းရဲ့လို့ တွေးမိပါတယ်။ တစ်ခုဆိုးတာက ဒီနေရာတစ်ဝိုက်က ဓာတ်သတ္တုတွေ အကြီးအကျယ်ထွက်နေတော့ ဒီတောင်လည်း ရှားပါး ဓာတ်သတ္တု တစ်ခုခုထွက်နေရင် တရုတ်တွေရဲ့ လက်ချက် ဒါမှမဟုတ် တယောက်ယောက်ရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အဖြိုခံရဦးမလား မသိပါဘူးဗျာ။
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ လေ့လာမှုနဲ့ စာတိုပေဆတွေဖတ်ပြီး လေးစားခင်မင်နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီ။
Aung Naing Tun said...
ဒီ link ကပုံမှာတော့ Silaung Taung လို့ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်
Visiting Barcamp Phonen Penh
Myanmar Government announced 5000 Kyat Bill will b...
သရက်ခုံ (ရေဇင်း) မြို့ဟောင်း
Google Earth shows Heart Shaped Mountain in Myanma...
Pros and Cons of Feeds
2009 Myanmar Bloggger Gathering and Srikhittra Exc...